6061 Aluminium 3NGAPHAKATHI x 5in rosin Plates Setha heater Isilawuli Heavy Duty rosin Cindezela Kit isilawuli ezimbili igobolondo heater - China Dongguan-Amoni Hardware
Umfutholuketshezi rosin Cindezela
Womoya rosin Cindezela
Electric rosin Cindezela
Clampshell rosin Cindezela
Vape Ipeni / Igobolondo
L0 Vape ngepeni
6061 Aluminium 3NGAPHAKATHI x 5in rosin Plates Setha heater Isilawuli Heavy Duty rosin Cindezela Kit isilawuli ezimbili igobolondo heater
Inkinga enkulu nge ngokucindezela rosin kuyinto izindleko imishini. Ngaphandle uzimisele yakho ukumpintsha out amanani encane resin usebenzisa straightener izinwele, ekuphumeni kwakho ukuba ukuchitha a bucks ezimbalwa. Ngizibonile eziningi imishini ezinkulu hamba zezinkulungwane zamaRandi, kodwa uchitha ukuthi wouldn`t kakhulu ukwenza umqondo ngaphandle yakho ukuqala ibhizinisi.
Uma yakho unesithakazelo ezinye rosin ezinhle ngaso isivuno esikhulu uye kudingeka izinto ezimbili:
Lapho Ukucindezela rosin, ukushisa kancane kuyadingeka ngesikhathi izingcindezi ephakeme, okusho unga cishe abandayo cindezela rosin, uma une imishini esifanele. Kodwa, kukuvumela lunamathele iskripthi lapha. I`m mayelana ukukubonisa indlela ungenza akho DIY rosin Cindezela ngaphansi kuka- $ 500.
Thats kwesokudla, cindezela ezingaba dish out 12,000lb yokucindezelwa nge Izilawuli lokushisa ezithela kakhulu! Okuhle kunakho konke, kuthatha nje imizuzu embalwa ukuze usethe bese usebenzisa.
Let`s sibhekane namaqiniso, ngokucindezela rosin kuyindlela engcono ngawakhamela zonke ayo kusukela insangu. Ngokusebenzisa ukushisa nokucindezelwa kukhishwe resin kusukela imbiza (isitshalo ndaba), noma ubani kungazuzisa ezinye high quality resin.
Inkinga enkulu nge ngokucindezela rosin kuyinto izindleko imishini. Ngaphandle uzimisele yakho ukumpintsha out amanani encane resin usebenzisa straightener izinwele , ekuphumeni kwakho ukuba ukuchitha a bucks ezimbalwa. Ngizibonile eziningi imishini ezinkulu hamba zezinkulungwane zamaRandi, kodwa uchitha ukuthi wouldn`t kakhulu ukwenza umqondo ngaphandle yakho ukuqala ibhizinisi.
Ingcindezi High - okungenani 500lb ukuze 1,000lb (amathani 2+ ayethanda)
Heat - 150 ° F kuya 350 ° F (200 ° F encomekayo)
Lapho Ukucindezela rosin, ukushisa kancane kuyadingeka ngesikhathi izingcindezi ephakeme, okusho unga cishe abandayo cindezela rosin, uma une imishini esifanele. Kodwa, kukuvumela lunamathele iskripthi lapha. I`m mayelana ukukubonisa how you can make your own DIY Rosin Press for less than $500.
Ukuze kwakhiwe leli Rig okudingayo imikhiqizo emibili elula:
Double rosin Cindezela Plates Kit Heavy Duty Dual Isilawuli Ibhokisi nge Wired Heating Rod
6-Ton umfutholuketshezi Isitolo Floor Cindezela ne Cindezela Plates futhi H Uzimele
Uma wakho hhayi ukushaqeka ephelele okwamanje, isidedele phezu imininingwane kokubili. Futhi indlela engcono kakhulu ngoba oyi ngokucindezela rosin amakhukhi i-ephakeme terpenoid ezithela.
I umfutholuketshezi Cindezela
Enamandla eziyisithupha ton cindezela lungaphansi Uhlaka H-okuqinile. Ukwakhiwa Super eqinile futhi elula thats Kulula ukuhlela. I komzila ohlangothini zinemigodi ukuthi akuvumela ukulungisa isikhala zokusebenza. Lihlanganisa 2 cindezela amapuleti, ukuzisebenzisa! Bayoba ukuvikela Ukushisa yakho amapuleti. Nge isisindo ingqikithi 60lb, ungakwazi ngokuphepha crank out amathani 6 ingcindezi, indlela ezingaphezu kuka uzodinga.
Heat elawulwa Cindezela Plates
0 ° F kuya 415 ° F kumaminithi !, Lezi esindayo duty amapuleti ungakwazi ukhiqize ukuthi ukushisa ngokwanele futhi ukumelana kufika ku 8000psi. Okuhle kunakho konke, amapuleti abathukuthelela lokushisa kwesokudla nge control box electronic! Wena Don`t kufanele iyadluthula emhlabeni nge abilayo amapuleti, noma ngabe usebenzisa ithoshi igalelo like ezinye ukucindezela.
Uma wake sicindezelwe rosin ngaphambi, kufanele abe nomqondo kuhle ukuba benzeni futhi kulula kanjani lokhu ukusebenzisa. Ukwakha cindezela akho uzokusindisa a ton of imali futhi usebenze kanye uma kungenjalo kangcono kunamanye ukucindezela ukuthi kukhona double intengo.
1.Plug futhi udlale 5 "X3" platen usethe. Sisebenzisa 6061 aluminium ngoba ukukhanya, eqinile, futhi ine omuhle kakhulu yokudlulisa ukushisa, okubangela kungekho asobala!
2.Dual amapuleti evuthayo, kokubili ukwabelana ukushisa zone.This bengashadile wazama, ihlolwe, futhi kungase kutholakale design kwaba nemiphumela emihle ngamakhulu izimo. Siwuhlole kokubili amade, kungekho isivuno esingcono noma okuyikhwalithi isilawuli ezimbili.
3.Fully olunembile lokushisa zokuqapha kusukela 0-300F kahle. ukushisa inzwa yethu sokuzivivinya ngqo amapuleti, eninika ngqo platen lokushisa kweqiniso.
5.Made ukuze uvumelane noma yimuphi umshini wokubacindezela izimpahla ezingamathani angu-20 nge inqama 2 "ubukhulu noma ngaphansi.
Ukukhweza amapuleti kwethu cindezela olikhethile akulula njengoba kokuqina ezimbili isethi nezikulufi (hex okhiye kuhlanganisiwe) ungene yenqama. Ukuhlela kuthatha esingaphansi kwemizuzu engu-5!
6.Reach lokushisa olifisayo ngemizuzu engaphansi kuka-10 nge 500w enamandla yethu igobolondo Ukushisa izakhi.
7.The Plates ongakhokhela ngokwabo emahoreni ambalwa wokuqala ukusetshenziswa!
Lokhu ikhithi kuhlanganisa:
isilawuli Digital olunezintambo ezimbili igobolondo 500w Ukushisa izakhi
Hex ukhiye ukukhweza amapuleti yakho ukuze cindezela olikhethile
One Year Isiqinisekiso Okugcwele ku electronics yakho
Ikheli: Warehouse ka-, eLos Angeles-Warehouse ka, + 3731B San Gabriel River Park ngendlela, Pico Rivera, CA 90660, USA
6061 Aluminium 3NGAPHAKATHI x 5in rosin Plates Setha ...